Dayuuradaha dagaalka Israel oo duqeeyay saldhig milatari oo ku yaal gudaha dalka Siiriya – idalenews.com
Dayuuradaha dagaalka ee Israel ayaa duqeeyay gudaha dalka Siiriya iyadoo weerarkan uu ahaa mid Israel ay dooneysay in ay ku duqeyso baqaaro hubka lagu keydiyo.
Weerarkan oo dhacay habeenimadii Jimcaha soo galaysay ayaan u muuqan mid ay halka la duqeeyay aysan ahayn meel lagu keydiyo hubka kimikalka ah, sida ay sheegeen saraakiil ka hadashay weerarkan ayaa loo geystay baqaaro lagu keydiyo hubka.
Dowlada Maraykanka ayaan ka hadlin arrinkan, balse xukuumada Israel ayaa rumeysan in ururka Xisbullah ee u uhogaamiyo Sheekh Xasan Nasrullah uu kaalmeynayo dowlada uu madaxweynaha ka yahay Bashar Al-Assad.
Hogaamiyaha Xisbullah ayaa dhowaan sheegay in uu taageerayo madaxweynaha dalka Siiriya haddii loo baahdo si loo soo afjaro kacdoonka mudada labada sano ah ka jira dalka Siiriya.
Sanadkii 2007dii ayaa xukuumada Israel waxa ay duqeysay saldhig ay ku tuhunsanayd in lagu farsamaynayo hubka Niyukliyerka ah, saldhigaa oo ku yiil waqooyi bari dalka Siiriya.
Warka ku saabsan weerarkan ayaa waxa uu soo baxay saacado kahor xilli uu madaxweyne Barack Obama uu ka sheegay shir jaraa’id dalka Costa Rica Jimcihii isagoo sheegay inuusan aaminsanayn in loo baahan yahay in dowlada Maraykanka ay u dirto ciidamo dalka Siiriya xilligan.
Inka badan toddobaatan kun ayaa ku geeriyootay boqolaal kun oo kalana waa ay ka qaxeen dalka Siiriya kadib markii kacdoon ka dhan ah xukuumada Siiriya uu ka bilowday dalkaas.